(Sawiro)Khayre oo la kulmay Culimaa’udiin caan ah oo ka yimid dalalka Kenya & Ugandha. – Xeernews24
(Sawiro)Khayre oo la kulmay Culimaa’udiin caan ah oo ka yimid dalalka Kenya & Ugandha.
14. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo hoggaaminayey guddigan Culimada ah ee dhaqaalaha ka soo aruuriyay Soomaalida ku nool dalalka Kenya iyo Uganda ayaa sheegay iney ka xun yihiin dhibaatadii ka soo gaadhay dadka Soomaaliyeed weerarkii 14-kii Octobar, isla-markaana ay garab taagan yihiin walaalahooda ay kooxaha argagixisadu dhibka u geysteen, lacagtanina ay tahay mid ay iska soo aruuriyeen Soomaalida ku nool Kenya iyo Uganda.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa mahadcelin kadib, ku dhiirrigeliyey hoggaamiyayaasha diinta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed in ay gacan ku siiyaan dawladda halganka iyo dagaalka ay kula jirto kooxda Al-shabaab.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/can3.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-14 19:40:232017-11-14 19:40:23(Sawiro)Khayre oo la kulmay Culimaa’udiin caan ah oo ka yimid dalalka Kenya & Ugandha.
Aasaskii iyo Sooyaalkii Taarriikhda faca wayn ee Magaalada Diri-dhaba Daawo Sawiradda Saraakiil Britain ah oo cidna ka war hayn kana Howlgala wadanka...